बच्चाहरू र स्मार्टवाच, एक सुरक्षित संयोजन? | ग्याजेट समाचार
बच्चाहरू र स्मार्टवाच, एक सुरक्षित संयोजन?
स्मार्टवच हाम्रो बच्चाहरूलाई सुरक्षित, वा अधिक नियन्त्रणमा राख्नको लागि उत्तम तरिका हुन सक्छ, यहाँ प्रत्येक अभिभावकले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने उपायहरू लिने छन्। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि यी प्रकारका उपकरणहरू अझैपनि बालबालिकाको श्रोताहरूबाट टाढा छन्। यस्तो देखिदैन कि निर्माताहरूले तपाइँलाई उस्तै चासो देखाउँछन् जब यो अनुप्रयोगहरूको विकासको लागि आउँदछ र ट्याब्लेटहरू।
हामी यो पनि भन्न सक्दछौं कि उनीहरूको नतीजा खराब छ। यस्तो देखिन्छ कि बच्चाहरूको सुरक्षा त्यति कम बढेको छैन जब उनीहरूको सानो पुतलीमा स्मार्ट उपकरणहरू समावेश गर्न आउँदछ यस प्रकारको घडिहरू जस्तै, तिनीहरू खराब संयोजन हो?
नर्वेली उपभोक्ता परिषद स्पष्ट छ कि कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्ना बच्चाहरूको सुरक्षाको लागि उपायहरू खोजिरहेका छैनन् किनकि निर्माताहरूले यी प्रकारका उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्ने छनौटको तथ्यलाई तिनीहरूले स्वीकार गर्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रण स of्घका विश्लेषकहरू यस कुरामा सहमत छन् र धेरै स्पष्ट छन् कि अत्यन्तै रोचक क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि यो निर्माणकर्ताहरूले कुनै स्पष्ट कारणका लागि पूर्ण रूपमा त्यागेको छ, त्यहाँ केही अभिभावकहरू छैनन् जो त्यहाँ जान्छन्। यी प्रकारका उत्पादनहरू प्राप्त गर्नुहोस् यदि उनीहरूले वास्तवमा अपेक्षाहरू पूरा गरे। हाल उनीहरूले बजारलाई विश्लेषण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् र नतिजा विनाशकारी छ।
एनसीसीले अनुप्रयोग र उपकरणहरूमा सुरक्षाको महत्वपूर्ण त्रुटिहरू पत्ता लगायो जुन परिवारको सबैभन्दा सानो सुरक्षा र जियोलोकेटेating्ग गर्ने उद्देश्यले हुन्छ। तसर्थ, ती कुनै पनि हिसाबले हाम्रो सन्तानलाई एक अपरिचितको हातमा समाप्त हुनबाट रोक्न एक विश्वसनीय विधि हो। वास्तवमा, यी केही उपकरणहरूमा सुन्ने संयन्त्रहरू पनि छन्, जसले नाबालिगको गोपनीयतालाई मात्र जोखिममा पार्दैन, तर वरपरका सबैको पनि। हुनसक्छ यो गर्नुहोस्, एनसीसी जस्ता नियन्त्रण मिडियाले यी प्रकारका उत्पादनहरूमा उल्लेखनीय कमीहरू फेला पारेको छ, त्यसैले तिनीहरू तिनीहरूलाई सिफारिस नगर्ने छनौट गर्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » बच्चाहरू र स्मार्टवाच, एक सुरक्षित संयोजन?
रेजर कियो, 'स्ट्रिमरहरू' को लागि निर्मित प्रकाशको साथ क्यामेरा
Gigabyte Aorus X9, एक सही "गेमि" "ल्यापटप